Maitiro ekunyorera akanakisa mutengesi: makiyi ekubudirira | Zvazvino Zvinyorwa
Maitiro ekunyorera anotengesa zvakanyanya
Paunofunga zvekunyora bhuku, chauri kuda ndechekuti ichi, kana uchichiisa pamusika, vanhu vazhinji vanozvitenga, voverenga, vokupa maonero avo ... Muchidimbu, kuti ibudirire. Nekudaro, izvi zvakaoma kwazvo kuzadzisa. Muchokwadi, mazhinji anobuda nekuda kwekurohwa kwerombo rakanaka, nekuti vakavhurwa panguva chaiyo kana nekuti vaive na god god kana god god. Izvi hazvireve kuti haugone kudzidza kunyora mutengesi wakanyanya, asi iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti, mune ino equation, mhanza inoitawo basa.
Zvino, Maitiro ekunyora mutengesi akanakisa aunofunga kufunga nezvekusiya rako rinofinha basa uye nekuzvipira iwe kunyora? Zvakanaka, chekutanga pane zvese iwe unofanirwa kuziva kuti ndezvipi zvinhu zvinokonzeresa kutarisa bhuku seanotengesa zvakanyanya, uyezve unofanirwa kutevera mamwe manomano ekuti iro bhuku rekunyora kwako rive rimwe chete.
1 Chii chiri chakanyanya kutengesa
2 Maitiro ekunyorera akanakisa mutengesi: akanakisa mazano
2.1 Iva wepakutanga
2.2 Iwe hauonekwe kana usina vaverengi
2.3 Taura nezvebhuku rako usati wapedza
2.4 Chenjerera mafambiro, kiyi yekunyora mutengesi wakanyanya
2.5 Bhuku rako ibhizimusi
Chii chiri chakanyanya kutengesa
Izwi rekuti mutengesi rinoreva, kana tichirishandura, kune "zvakanakisa kutengesa." Ndokureva kuti, yakanangana nezvenyika yezvinyorwa, raizove basa rine budiriro huru yekutengesa kana iro rinobata kutarisisa kwemuverengi zvekuti havagone kurisiya kusvikira kumagumo nekurikurudzira kune wese munhu.
Aya maitiro ndiwo anotsanangura izvo zvingave zviri zvakanak kutengesa mutengesi: bhuku rinova rinobudirira, iyo ine zviuru zvekutengesa uye kuti munhu wese anotaura nezvazvo. Mienzaniso yacho? Eya, Makumi mashanu emimvuri yeGrey, Iyo Mbiru dzePasi, Iyo, Iyo Da Vinci Code ... Dzese dzakatangwa uye nekukurumidza dzakarova zvine simba, dzichishandurwa mumitauro yakawanda, riri bhuku rinotengesa zvakanyanya kwemavhiki, nezvimwe.
Maitiro ekunyorera akanakisa mutengesi: akanakisa mazano
Munyori wega wega anoda kuti bhuku rake rive rinotengesa zvakanyanya. Pamwe nekuti vanowana mari yakawanda nenzira iyoyo, kana nekuti vanhu vazhinji vanovaverenga, chokwadi ndechekuti kuwana chirevo ichi hakusi nyore. Hazviiti? Zvimwe. Asi hapana mashiripiti fomula yatinogona kukuudza iwe kuti uzviite.
Chatinogona kukupa iwe akati wandei mazano ayo achauya anobatsira kuona kuti bhuku iri rine mikana yakawanda yekuzviita. Wagadzirira?
Kana iwe uchida kunyora mutengesi akanakisa, unofanirwa Ipa vaverengi chimwe chinhu chavasati vamboverenga. Izvo zviri kuramba zvichinyanya kuoma, nekuti zvese zvinhu zvakagadzirwa, asi iwe unofanirwa kufunga nezvenyaya yacho zvakawandisa uye kufunga nezvekukosha kwazvingaunzire muverengi, nei ichigona kusiyaniswa nemamwe mabhuku.
Semuenzaniso, kana paine mabhuku mazhinji pamusoro pehutongi hwevanhurume, haufunge here kuti rimwe pamusoro pehutongi hwevakadzi rinogona kukwezva?
Iwe hauonekwe kana usina vaverengi
Vaverengi chikamu chakakosha kwazvo chemunyori, zvekuti vanovada kuti mabhuku atengeswe uye averengwe. Pasina vateereri, ivo havasi chinhu. Uye izvi nemasocial network hazvina kuoma kuwana.
Chinangwa chako mune ino kesi ndeche gadzira nharaunda yevateveri, yevanhu vaunopinda navo, kuti iwe unozvifunga uye kuti ivo vanoziva zvaunoita uye zvaunowana. Zviripachena, iwe hausi kuzoiwana nezuva rimwe chete, kwete maviri kana matatu. Kwete mumwedzi zvakare. Zvinogona kutora makore kuti zviite saizvozvo. Uye iwe unofanirwa kuenderana, kuve pachena (nekuti izvi zvinonyanya kudiwa kune vanyori, nezvimwewo).
Nekudaro, kana iwe uchinyara kana usingade kuiswa mune zvako zvakavanzika, iwe unogona kuzvisiya izvo padivi kana iwe uchida kubudirira uye kunyora mutengesi akanakisa.
Taura nezvebhuku rako usati wapedza
Uyu munondo unocheka nekwose saka unofanirwa kungwarira nawo. Izvo ndezve kupa vateveri mabrush mabhureki nezve izvo zvauri kushanda pariri. Mune mamwe mazwi, kusimudzira bhuku kunyangwe risati rapera izvozvi.
El chinangwa ndechekusika kutarisiraKuti vaverengi vanoda kuriverenga nekukurumidza sezvazvinogona, kuti ivo vade murudo kwete nebhuku chete, asi neyakagadzirwa nzira inoitwa.
Uye sei tichiti iwo munondo unocheka nekwose? Zvakanaka, nekuti makwikwi ako aripowo, uye iro zano rekutanga rawakambove naro, kana ukasatarisira zvaunotaura (uye ukasiya mutauro) vanogona kuriteedzera.
Saka chenjera zvaunoburitsa.
Chenjerera mafambiro, kiyi yekunyora mutengesi wakanyanya
Paunenge uchinyora mutengesi wakanyanya, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti uchave nemukana uri nani wekubudirira kana iwe ukatora chimwe chinhu chinonakidza vanhu vazhinji, Usafunge Semuenzaniso, Kubvunzurudza neVampire kwaive kubudirira nekuti zvimvhure, pakabuda bhuku racho, vaifarira. Ichokwadi kuti mushure meizvozvo pakanga paine boom, asi iro bhuku, nekuda kwekutanga kwaro, rakaita kuti izvi zvikwanisike.
Zvakanaka, iwe unofanirwa kuita zvakafanana, iwe unofanirwa kunzwa kutenderera kuti uwane izvo zvinofadza vanhu, izvo zvavanoda kuverenga. Uye unozviwana sei izvozvo? Zvakanaka, iwe unogona kutarisa zvinyorwa zvevanotengesa zvakanyanya, kuita ongororo pakati pevateveri vako, kana kuziva nyaya dzetsika nedzedzidzo kuti uzive zviri kuitika iyezvino (asiwo ramangwana, nekuti kunyora bhuku hakuitwe nehusiku. mangwana, zvishoma kana iwe uchida mutengesi wakanyanya).
Bhuku rako ibhizimusi
Zvakanaka kufunga kuti bhuku ipfuma, kuti iwe wakapa zvese zvaunogona kuti uite napose paunogona napo uye izvo zvaunoda kubudirira. Asi usambofa wakakanganwa kuti ibhizinesi. Zvinorevei izvo? Zvakanaka, iwe unofanirwa kufunga nemusoro. Kambani yega yega inotanga kugadzira zvigadzirwa isinganyatso kuziva kana ichatengesa. Uye chinhu chimwe chete ichocho chinoitika kwauri.
Nokudaro, kuva nezano kwakakosha kwazvo. Nyanzvi dzinokurudzira kuti ive inosvika matanhatu pamberi. Ndokunge, iwe unotanga kufunga nezve zvese zvauchazoda, kusimudzira, kuparadzira, nezvimwe. nenguva yakawanda.
Chaizvoizvo haugone kutorwa nemanzwiro uye fungidziro iwe wawakaisa mukunyora kwako, iwe unofanirwa kufunga kuti ikambani uye une musoro unotonhorera kuzadzisa icho chinangwa chekunyora mutengesi wakanyanya.
Asati, panguva uye shure. Nguva dzose. Usarega mabhuku ako achiwira mukukanganikwa nekuti mutengesi wakanyanya hazvireve kuti inofanirwa kunge ichangobva kuitika, asi kuti, pane imwe nguva, inokwezva kutarisisa kwakanyanya zvekuti inotanga kutengesa.
Ichi chikonzero nei kukwidziridzwa kuchikosha. Uye mune dzakawanda zviitiko zvinoreva kuburitswa kwehupfumi muchimiro chemabhuku emahara (pabepa nedigital) kuti vanhu vakuongorore, vataure nezvako munhau, nezvimwe. Chinhu chakanakisa mune ino kesi kugovera bhajeti zvichibva pane zvaunogona.
Nezvese izvi hatigone kukuvimbisa iwe nezvebudiriro kana uchinyora mutengesi wakanyanya. Asi iwe unogona kuve padyo nekuzviita. Une rimwezve zano rekutisiya isu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Maitiro ekunyorera anotengesa zvakanyanya